Fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီး Instagram မှာ Follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ မြန်မာအနုပညာရှင် ၅ ဦး – FemaleWear.net
အနောက်တိုင်းက celebrity တွေအကြောင်း ပြောနေရတာ ရိုးနေပါပြီ။ ဒီတခါတော့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံက အနုပညာရှင်တွေလည်း Fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီး hollywood အနုပညာရှင်တွေကို လက်လှမ်းမှီသလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် မြန်မာမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ Fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီး hollywood အနုပညာရှင်တွေကို လိုက်ကြည့်နေစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာတင် အမြဲ update ဖြစ်နေတဲ့ အနုပညာရှင် ၅ ဦးကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မြန်မာမင်းသမီးဆိုတာနဲ့ ပြေးမြင်မိမှာက ကစ်ကစ်လေးပါဘဲ။ ဘယ်လောက်အသက်ကြီးလာလာ ခန္ဓာကိုယ်သေးသေးကျစ်ကျစ်လေးနဲ့ အမြဲတမ်းတက်ကြွနေတဲ့ အကယ်ဒမီများဆုရှင် မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ fashion တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ကျတယ်လို့ကို မရှိသေးပါဘူး။ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ အနောက်တိုင်းဆန်ဆန်သာမက မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ပါ အမြဲသတိထားကြည့်နေရသူပါ။ သူမကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတင် ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ တရုတ်သတင်း website တစ်ခုမှာတောင် အလှဆုံးစာရင်းဝင်အဖြစ် ဖော်ပြခံရသူတစ်ဦးပါ။ သူ့ရဲ့ပုံလေးတွေကိုတော့ facebook မှာထက် Instagram မှာ အများဆုံးတင်လို့ သူမရဲ့ Instagram ကိုလည်း Follow လုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Last day in May Myo .
A post shared by Wutt Hmone Shweyi (@wutthmoneshweyi) on Mar 7, 2018 at 1:12am PST
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ရွှေမှုန်လေး အကြောင်းကလည်း အထူးတလည်ပြောနေစရာ မလိုလောက်ပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီများစွာကို မှန်းခံနေရတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ သူမကတော့ သူ့ရဲ့ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြင်သစ်နဲ့ ဘန်ကောက်ကို shopping ထွက်လေ့ရှိသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုန်လေးရဲ့ fashion ဟာလည်း Hollywood မင်းသမီးတွေနဲ့အပြိုင် ယှဉ်နိုင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ website တစ်ခုမှာတောင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလှဆုံးမင်းသမီးစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမရဲ့ Instagram ကိုလည်း Follow လုပ်ထားဖို့ လိုတယ်နော်။
A post shared by Shwe Hmone Yati (@shwehmoneyati) on Mar 13, 2018 at 10:08pm PDT
Fashion မင်းသမီးလို့ တင်စားထိုက်တဲ့ သင်ဇာလေးကလည်း fashion နဲ့ပတ်သက်လာရင် ထိပ်ဆုံးကနေရာယူထားသူတစ်ဦးပါ။ သူမကတော့ သူမရဲ့လှပသွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲဂရုစိုက်အလေးထားသူပါ။ Body ကောက်ကြောင်းအလှနဲ့ ပုံတွေကို တင်လေ့ရှိသူမို့ အမျိုးသမီးအများစု အားကျရတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ Instagram ကိုလည်း Follow လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
The way we dress doesn’t mean yes #beachgirl #tannedskin #lovetowearbikini ????
A post shared by ?Love My Fans & Followers? (@thinzarwintkyaw) on Mar 5, 2018 at 7:04pm PST
ဒီတခါတော့ ခြည်ခြည်လေးအလှည့်ပါ။ ခြည်ခြည်တစ်ယောက်ကတော့ Beauty blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိပြီး အခုဆိုခေါင်ဆောင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအနေနဲ့တောင် ရုပ်ရှင်တင်စပြီး ရိုက်ကူးနေပါပြီ။ သူမကတော့ အနောက်တိုင်း fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီး အရူးအမူးလိုက်စားသူမို့ Hollywood မင်းသမီးတွေနဲ့အပြိုင်လိုက်နိုင်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ Instagram ကိုလည်း follow လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
Missing white sands and blue ocean… ?????
A post shared by Nay Chi Oo (@beautybynaychi) on Mar 8, 2018 at 12:26am PST
၅။ Awn Seng
Fashion နဲ့ပတ်သက်ရင် အောန်ဆိုင်း ကိုလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ သူမကတော့ model တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်နေပြီး အောင်မြင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကထဲကို စဝင်လာကတည်းက ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ အလှနဲ့ အနောက်တိုင်းသူဆန်ဆန်လှပသော တိုင်းရင်းသူလေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း instagram မှာ Fahion အမိုက်စားတွေကို မျှဝေလေ့ရှိတာမို့ Follow လုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းရင်း အခုဘဲ Instagram ကို အပြေးလေး သွားလိုက်နော်…
No complaints ☕️
A post shared by Elizabeth Awnseng #QueenAwn ?? (@awnseng) on Sep 19, 2017 at 11:51pm PDT